Imibhalo kaGuy Goldstein mayelana Martech Zone |
Imibhalo nge UGuy Goldstein
UGuy uyi-Marketing Automation kanye ne-Operations Consultant. Ubuchwepheshe be-G8 isebenzisa indlela ehlangene ye-hybrid ekuzenzekelayo kokumaketha, idweba zombili kusuka kokumaketha kwendabuko kanye nesipiliyoni sokumaketha kolwazi ukusiza amaklayenti athole impumelelo. Ukuncika kokuhlangenwe nakho nasekuhlaziyweni i-G8 isebenza ngokubambisana namakhasimende ayo ukuhlinzeka ukumaketha okuhlelwe kahle, okwenziwe ngokwezifiso okuxubile kumabhizinisi amaklayenti ngamanye
Ukumaketha Okusekelwe Akhawunti ye-Marketo: Okudinga Ukwazi
NgoMsombuluko, Okthoba 10, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 UGuy Goldstein
UMarketo ukhiphe imodyuli yakhe ye-Account Based Marketing (ABM) njengengxenye yomzamo owandayo wokuxhasa kangcono ubudlelwane bebhizinisi. Ngenkathi ithuluzi uqobo lwalo kunguhlobo lwangaphambilini futhi libonisa isithembiso esikhulu, kunezindlela ezithile i-ABM esethwe ngazo ukuguqula amabhizinisi aqala ukusebenzisa ipulatifomu. UMarketo uchaza izinto ezintathu ezihlukile zesisombululo se-ABM: Amandla wokukhomba nokuphatha ama-akhawunti nohlu lwama-akhawunti. Amandla okubandakanya okubhekiswe kukho